Home > Travel Europe > Eoropa mahatsapa ny Sakafo tsara indrindra Places
Eoropa amin'ny maha kaontinanta azy dia tena samihafa, Eoropa manolotra zavatra ho an'ny isan-karazana dia lavitra - matsiro kaikitry tafiditra. Fa aiza kosa ny tsimon'ny tsiro ho faly indrindra? Inona no hisakafoanana pic ny Instagram tsaina anao koa anefa ny 100 ny ny tiany? Aza manontany tena ary hanomboka munching. Eoropa mahatsapa ny Places Sakafo tsara indrindra amin 'ny Top Picks!
1. Sakafo tsara indrindra Eoropa Places – Gresy
Eoropa mahatsapa ny Sakafo tsara indrindra Places in Gresy. Iza no mety ho tia sakafo feno ny filo mofomamy? Grika sakafo Sarotra ny tsiny ary angamba manan-manao ny tantara. Ny firenena culinary kolontsaina dia heverina ho ny 4,000 taona. Tsy afaka mikapoka traikefa ary izany no mahatonga izany Sakafo tsara indrindra Eoropa Places.
Ny fotoana no nandao ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby, ianao efa baomba miaraka amin'ny fihaingoana ny mahagaga safidy. LAHARAM-PAHAMEHANA. Manofa bisikileta. dingana 2. Mitaingina izay misy ny orona mitondra anao! Eoropa Places Sakafo tsara indrindra ao Amsterdam hoan'ny isan-karazany ny antony. Na inona na inona ny teti-bolanao, misy zavatra ho an'ny olona rehetra! Afaka nataonao mitsidika mandritra ny herinandro ary haharitra fotsiny eny an-dalambe dia mandinika ny saran-dalana sy ny tsena.
Tsy mahalala hoe aiza no manomboka? Get andro fifadian-kanina teny fanolorana ny Amsterdam amin'ny sehatry ny sakafo iray vilia sitrana Herring avy amin'ny iray amin'ireo tanàna maro Herring sarety na Herring varotra. Raha masaka ny trondro ianao dia manandrana mitady mafy kibbeling. Dia namely sy ny lalina-trondro nendasina fotsy nanompo tamin'ny saosy mayonnaise. Fa tsindrin-tsakafo. Pop ho any amin'ny 100 ny ny mpivaro-mofo.
Raha tadiavinao zavatra hanim, dia tsy ho fohy ny Safidy for fromazy. Izy ireo eny an-dalana ara-bakiteny ny teny rehetra zorony. Ny ankafizinay? A syrup waffle ahitana roa maivam-boa waffles, endasina miaraka amin'ny hatsaram-panahy gooey ao anatiny ary asiana siramamy vovoka.
Ahoana moa no mieritreritra mihitsy aza ny fanomezana anarana Eoropa Places Sakafo tsara indrindra fa tsy ahitana Italia! Misy firenena eoropeanina bebe kokoa sakafo malaza? Salama, carbs! Ny pizza sy ny paty dia eo amin'ny lisitra rehetra! Tadidio fotsiny fa ny faritra rehetra dia manana ny mampiavaka azy ary miankina amin'ny vanim-potoana.
4. Sakafo tsara indrindra Eoropa Places – Frantsa
Lyon, fantatra amin'ny hoe Frantsa's Gourmet capital dia tsy mbola nisy idirana, miaraka amin'ny mivantana fiaran-dalamby ho any London ary TGV fifandraisana izay whisk anao Paris na Marseilles ao anatin'ny adiny roa. Ve ny mahatsiaro ny tsimon'ny tsiro sahisahy? tsara! Manana Fifaliana ho anao! Andramo ny eo an-toerana manokana; apron sapper (breaded tripe), dia hahavitanao azy eny amin'ny fitsidihana ny mandrakizay-malaza Croix-Rousse distrika vitsivitsy zava-pisotro avy amin'ny tanàna.
Mety ho iray amin'ireo Eoropa Places Sakafo tsara indrindra nefa tsy tonga tsy misy fampitandremana: "Teny iditra" azo ampiasaina any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao fa midika hoe "lehibe sakafo,"Fa amin'ny teny frantsay, fa raha ny marina dia midika hoe "appetizer."Koa hifikitra amin'ny" Teny iditra "ho appetizer sy ny" plat "ho an'ny tena sakafo, ary ianao tonga teo amin'ny lafiny iray koa amin'ny kibo sy feno be traikefa.
Lyon any Toulouse Lamasinina
Paris ho any Toulouse Lamasinina
Marseilles ho Toulouse Lamasinina
Bordeaux ho any Toulouse Lamasinina
Ny sakafo London toe-javatra dia mbola anisan'ny Eoropa Sakafo tsara indrindra Places mandra-fantatsika ny vokatry ny Brexit. London sehatra dia mish-Masy ny nentin-drazana sy ny culinary fahitana zava-baovao maoderina. Tsy misy fitsangatsanganana mifantoka amin'ny sakafo any London fa tsy misy dite atoandro, Alahady hatsatsika tao amin'ny faritra niaraka tamin'ny iray Pub pint ny bitters na ny takeaway trondro sy ny poti- avy amin'ny iray amin'ireo tanàna maro 'chippies.’ Raha Michelin-nasianao kintana lakozia kokoa ny zavatra, Dia mbola ianao eo amin'ny toerana tsara. Misy dimy amin'izao fotoana izao indrindra any Angletera, izay mihazona telo Michelin kintana. The akaiky rano Inn, Alain Ducasse amin'ny Dorchester, The Araki, Restaurant Gordon Ramsay, ary ny saborany Gana.
Bordeaux ho any London Lamasinina
Geneva ho any London Lamasinina
Ve ny tsimon'ny tsiro tora-kovitra? Moa ny vavony zavatra mirohondrohona in mialoha? Boky ny fiaran-dalamby manaraka traikefa nahafinaritra ny culinary any an-danitra ny safidy noho ny fanampian'ny SaveaTrain. Boky ao anatin'ny 3 minitra tsy misy saram famandrihana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperience-europes-best-food-spots%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
europetravel Tendan-kanina London longtrainjourneys Lyon Train Travel travelamsterdam travelfrance